को हुन् यी बहादुर योद्धा ?
तस्वीरले नेपालीको वीरता प्रतिबिम्बित गर्छ। धेरै ठाउँमा प्रयोग भएको यस चित्रमा देखाइएका सैन्य योद्धा को हुन् भन्ने विषय भ्रम छ।
तस्वीरमा युद्धरत सैनिक चोटपटक लागेर घाइते देखिन्छन् तर पनि साहसमा साथ तरबार उठाइरहेका छन्। यी सैनिकलाई धेरैले भक्ति थापा, कोहीले बलभद्र कुँवर त कोहीले पृथ्वीनारायण शाह भन्छन्।
तर यी योद्धा हुन् ‘बहादुर कर्णेल’।
‘यो ऐतिहासिक चित्र बहादुर कर्णेलको हो’, इतिहासकार पुरुषोत्तमशमशेर जबरा आफ्नो लामो अनुसन्धानको निचोड बताउँछन्। जबराले श्री ३ हरूको साथै तत्कालीन सैन्य इतिहास सम्बन्धी आधा दर्जन पुस्तक लेखेका छन्। ती पुस्तकमा कतै न कतै बहादुर कर्णेलको चर्चा गरिएकै छ।
आखिर को हुन् त बहादुर कर्णेल? जसको यही एउटा तस्वीर वर्षौंदेखि नेपाली इतिहासमा प्रयोग हुँदै आइरहेको छ।
सैनिक इतिहासमा उल्लेख भएअनुसार बहादुर कर्णेल नेपाली सेनाका अधिकृत हुन्। उनको वास्तविक नाम गम्भीर सिंह रायमाझी हो। तत्कालीन समयमा राणाहरू भन्दा बाहेकका सैनिक कर्मचारीहरू कर्णेल भन्दा तलको पदमा मात्र रहन पाउँथे। तर श्री ३ जंगबहादुर राणाले गम्भीरसिंहको बहादुरी देखेर उनलाई बढुवाका साथै आफ्नो नामको अगाडि ‘बहादुर’ उपाधि लगाउन आदेश दिए।
यस्तै नेपाली सैनिक इतिहास र रायमाझी कूलको वंशावलीमा बहादुर कर्णेलको बारेमा लेखिएको छ–‘बहादुर गम्भीर सिंह रायमाझीको जन्म वि. सं. १८८४ र ८५ तिर पाल्पाको छहरामा भएको थियो। उनी सुरूमा लेफ्टिनेन्ट पदबाट नेपाली सेनाको देवीदत्त पल्टनमा भर्ना भए। त्यसपछि गम्भीरसिंह आफ्नो बहादुरी र सुरो स्वभावका कारण वढुवा हुँदै कर्णेलसम्म भए।’
यसैगरीमा भारतमा सन् १८५७ मा भारतमा घटेको सैन्य विद्रोह साम्य पार्न नेपालका प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले भारतीय इस्ट इण्डिया कम्पनीलाई चौध हजार फौज सैनिक सहयोग गरेका थिए। यो नेपालले विदेशी राष्ट्रलाई सैन्य सहयोग गरेको पहिलो घटना थियो। यसै कारवाहीमा गम्भीरसिंहले अभूतपूर्व बहादुरी प्रस्तुत गरेको कुरा त्यहाँ पनि उल्लेख छ। त्यसै बखत बहादुर कर्णेलले आफुलाई एक्लै घेरा हाली मार्न आउने सात जना सरदारहरूलाई मार्न सफल भए।
माथि चर्चा गरिएको तस्वीरले यही युद्धलाई देखाएको छ। जहाँ आफूलाई चोट लागेपछि पनि बहादुर कर्णेल लडाइँ गरिरहेका छन्। उनको पेटमा तरबारले काटेको छ भने चिउँडोमा पनि घाउ छ। तर खुकुरी उज्याएर उनी लडाइँ गरिरहेकै छन्।
बहादुर कर्णेलको साहस तत्कालीन समयमा निकै चर्चित रहेको बताउँछन् पुर्षोत्तम शमशेर जबरा। बयानब्बे वर्षीय जबरा सानो छँदादेखि नै उनका पिता, काका तथा अन्य उच्चपदस्थ सैनिक अधिकृतहरू बहादुर कर्णेलको बारेमा बेलाबेलामा कुरा गरिरहन्थे।
‘मलाई बहादुर कर्णेल त्यस चर्चाले निकै आकर्षित गर्यो’, उनी सुनाउँदै गए।‘यसपछि इतिहास लेखनतर्फ मैले आफूलाई अघि बढाएँ। लेखनको लागि विभिन्न सामाग्री खोजि गर्ने क्रममा राणाकालीन ऐतिहासिक दस्तावेजहरू तथा तस्वीहरू फेला पारेँ। आफ्ना हजुरबुबा फिल्ड मार्सल रूद्रशमशेरले सुनाएका धेरै घटनाक्रमहरू पनि टिपोट गरेँ।’..